ao amin'ny zotra TCE mampitohy an’i Moramanga sy Brickaville. Omaly 1 aogositra tokony ho tamin’ny 3 ora tolandro teo no nisehoan’ny loza, ka raha ny fanazavana vonjimaika dia raha izy hiditra ny tetezan'ny Jirama teo Andekaleka iny no latsaka ny "wagon", ka izay no nitarika ny loza. Raha ny vaovao azo farany omaly hariva hatrany moa, dia olona 2 no namoy ny ainy ary 8 no naratra nandritra ity loza an-dalamby ity tsy dia fahita ity, ka ny 4 nalefa notsaboina ao Moramanga. Tsy dia fampiasa firy na koa tsy dia malaza loatra rahateo ny fitaterana an-dalamby eto amintsika satria na ny fotodrafitrasa na ny fitaovana aza, dia efa nolovaina tamin’ny fanjanahan-tany. Ilaina sy manampy betsaka anefa io. Tsetsatsetsa tsy aritra ihany koa ny hilazana hoe fifandrifian-javatra ve sa ahoana fa herintaona katroka omaly nisian’ny loza no nitokan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny tetezan'i Sanjavavy ao Lohariandava Brickaville PK215+600, izay mitetim-bidy 2 miliara ariary? Omaly hariva, dia naneho ny fiaraha-miory sy nirary fiononana feno ho an’ireo fianakaviana namoy havana, ary mirary fahasitranana haingana ihany koa ho an’ireo naratra ny Praiminisitra Ntsay Chrisitan, ary hidina any an-toerana handray an-tànana ireo niharan-boina ny tenany.